UMFCCI Training Institute မှ သင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ | UMFCCI
Written by UMFCCI Administrator // August 9, 2018 // Training Programs // No comments
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ ကြီးမှူး၍ အသင်းချုပ်အသင်းဝင်များနှင့် ညီနောင်အသင်းအဖွဲ့များ၏ အသင်းဝင်များ အသိပညာ ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး UMFCCI Training Institute တွင် သင်တန်းများကို (၁၅.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1. Office Management Batch-26
2. Business Management Batch-6
3. Human Resource Management (Basic Level) Batch-20
4. Basic Sales & Marketing Batch-19
5. Higher Sales & Marketing Batch-14
6. Strategic Management Batch-3
7. Business English (Beginner Level) Batch-24
8. Business English (Intermediate Level) Batch-7
9. Customer Service Management (Basic Level) Batch-2
10. Business Consulting Service Provider Batch-5
11. Financial Management (Basic Level) Batch-20
12. Systematic Distribution & Management (Logistic & Supply Chain)(Basic Level) Batch-21
13. Logistic and Supply Chain Management (Advanced Level) Batch-2
14. Practical Approach to International Trade Batch-24
သင်တန်းများအားလုံးအတွက် သင်တန်းကာလမှာ (၂) လခွဲ မှ (၃) လအထိ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းအားလုံး သင်တန်းသားဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ (၁၄.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် လက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်စဉ် (၁) နှင့် (၄) အတွက်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်/ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိ၍၊ လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ ဖြစ်ရပါမယ်။
အမှတ်စဉ် (၇) နှင့် (၈) အတွက်
ဘွဲ့တစ်ခုခုရှိရမည်ဖြစ်ပြီး တက်ရောက်ရမည့် Level အား Placement Test ဖြေဆိုရပါမယ်။ (Placement Test စာမေးပွဲရက်အားထပ်မံကြေငြာပေးမည်)
အမှတ်စဉ် (၆) နှင့် (၁၀) အတွက်
ဘွဲ့ရဖြစ်၍ လုပ်ငန်းခွင်၌ Supervisor/ Assistant Manager/ Manager Level ဖြင့် လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး လုပ်သက်အနည်းဆုံး (၂)နှစ်နှင့်အထက် ရှိရပါမယ်။ သင်တန်းအပ်သည့်အခါ ကုမ္ပဏီမှထောက်ခံချက်(သို့)ဝန်ထမ်းကဒ်မိတ္တူ ပူးတွဲတင်ပြရပါမယ်။
အမှတ်စဉ် (၅) နှင့် (၁၃) အတွက်
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သတ်၍ UMFCCI Training Institute (သို့) ပြင်ပသင်တန်းများ၌ Basic Level တက်ရောက်ပြီးသူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်များ၌ Supervisor/ Assistant Manager / Manager Level ဖြင့် လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသူများတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းအပ်သည့်အခါ ကုမ္ပဏီမှထောက်ခံချက်/ ဝန်ထမ်းကဒ်မိတ္တူ ပူးတွဲတင်ပြရပါမယ်။Group Assignment အား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေး/ဖတ် တင်ပြနိုင်ရပါမယ်။
Basic Sales & Marketing နှင့် Office Management သင်တန်းမှလွဲ၍ ကျန်သင်တန်းများအားလုံးမှာ ဘွဲ့တစ်ခုခုရှိမှသာ တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္ထူ/အောင်လက်မှတ်မိတ္ထူ၊မှတ်ပုံတင်မိတ္ထူ၊ ဝန်ထမ်းကဒ်မိတ္ထူ (သို့) ကုမ္ပဏီထောက်ခံချက်(အမှတ်စဉ် – ၅၊ ၆၊ ၁၀ နှင့် ၁၃)
အသေးစိတ် စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက –
၀၁ – ၂၃၁၄၃၄၄ မှ ၄၉ (လိုင်းခွဲ – ၁၃၄)၊ ၀၁ – ၂၃၁၇၄၇၉၊